Shiinaha Customized boorsada maqaarka Haweenka Custom, Shirkado, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd.
Guri > Boorsooyin > Boorsada dhabarka shiraaca > Boorsada maqaarka dumarka
Boorsada caadiga ah ee haweenka
1. Soo bandhigida alaabada ee boorsada firaaqada haweenka
(1) Dharka kore ee boorsada firaaqada haweenka waxay ka samaysan tahay dhar heer sare ah PU. Maaddadani waxay leedahay xoog is jiidjiidasho iyo adkeysi xidhasho, waxay si wax ku ool ah uga horjoogsan kartaa roobka qoynta bacda, waxayna leedahay bilic sharaf leh Waxqabadka biyuhu wuxuu gaari karaa: IPX3 ama IPX4.
(5) Boorsadeenna caadiga ah ee haweenkeennu waa mid casri ah, biyo-diid ah, culeys ka yar, aan ka baqayn qabow, awood ballaaran oo gudaha ah, jeebado badan, waxaana lagu ridi karaa waxyaabo kala duwan oo muhiim ah sida IPAD, dallad, qurxiyo, iwm.
2. Xaddidyada alaabada (qeexitaannada) boorsooyinka caadiga ah ee dumarka
Boorsada haweenka ee caadiga ah
Dhererka 26cmX Width 15cmX Dhererka 31cm
Waxay ka koobantahay IPAD, taleefanka gacanta, boorsada jeebka, joornaalka A4
3. Astaamaha iyo codsiyada boorsooyinka caadiga ah ee dumarka
(2) Waxaad u isticmaali kartaa boorsadan casriga ah inta lagu jiro shaqada, safarka, safarada ganacsiga iyo waqtiga firaaqada ah si aad si fudud ugu keydiso iPad-kaaga, taleefanka gacanta, boorsada jeebka, iyo joornaalka A4. Waxyaabaha kala duwan ee lagama maarmaanka u ah sida dalladaha iyo waxyaabaha la isku qurxiyo.
5. Baakadaha iyo geynta boorsooyinka caadiga ah ee dumarka
Calaamadaha kulul: Boorsada maqaarka haweenka, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka